Messaggio del 2 Agosto a Mirjana, parla la Madonna a Medjugorje | Io amo Gesù
Ozi nke August 2 na Mirjana, Nwanyị nwanyị anyị na-ekwu okwu na Medjugorje
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 2, 2020
Mụaka, abịakwutewo m aka m imeghe unu niile, nara m nke ọma. Ma apughi m ime nke a ma ọ bụrụhaala na obi gị jupụtara n'ọkụ na arụsị ụgha. Ghichaa ya ma nye ndi mmuo ozi ohere ito obi gi. Ma n’otu oge ahụ, m ga-ewere gị n’okpuru uwe m nye gị nwa m ezi udo nke ezi obi ụtọ. Echekwala ụmụ m. Daalụ.
Uzo esi na akwukwo nso puru inyere anyi aka ịghọta ozi a.
Ihe omimi nke arusi bu mmalite nke umu nwanyi, ihe ha choputara mebiri ndu ha. Ha adighi adi na mbu, odighikwa ha adi. Ha batara n'ụwa maka ihe-efu nke madụ, ya mere ejiri kpebie ha ngwa ngwa. Otu nna, site na iru uju n’amaghị nwa, nyere iwu ka nwa nwoke nwude ihe nwa oge, ma kwanyere ya ugwu dịka chi nke na - eme onye nwụrụ anwụ nyere ndị ọrụ ya ihe omimi na oge mmalite. Mgbe ahụ usoro nmebi iwu ahụ, ebe e wusiri ya ike, ka elere anya dịka iwu. Ekelekwara ihe oyiyi a ofufe site n’aka ndị eze: ndị ọ na-achị, n’enweghi ike ịsọpụrụ ha na mmadụ site n’ebe dị anya, jiri ihe osise mee ebe dị anya, mee ihe oyiyi a na-ahụ anya nke eze nsọpụrụ, iji jiri ịnụ ọkụ n’obi na-agwa ndị na-anọghị nso, dị ka a ga-asị na ọ nọ. N'ịgbasawanye òtù nzuzo ọbụna n'etiti ndị na-amaghị ya, ọ kpaliri ebumnuche onye omenkà ahụ. N’ezie, ndi nke ikpe azu, chọsiri ike ime ihe obi uto, n’eji ikike iji mee ka onyinyo di nma; Site na amara amara nke ọrụ ahụ dọtara ndị mmadụ, lelee ihe ofufe bụ onye a na-asọpụrụ tupu ọ bụ nwoke. Nke a ghọrọ ihe dị egwu nye ndị dị ndụ, n'ihi na ụmụ nwoke, ndị ọdachi dakwasịrị ma ọ bụ ndị ọchịchị aka ike, tinyere aha na-enweghị ike ịkọwa aha na nkume ma ọ bụ osisi.